Ntughari ohuru 1P, 2P, 3P, 4P, 125A Manual Changeover Switch
AS (M) -125 usoro echichi na ọrụ ntuziaka Nkịtị ọrụ ọnọdụ 1.The ikuku okpomọkụ bụ -5 ～ ～ + 40 ℃, nkezi uru n'ime 24 awa ekwesịghị n'elu 35 ℃. 2.The ikwu iru mmiri ekwesịghị gafere 50% na max okpomọkụ + 40 ℃, na elu ikwu iru mmiri bụ nke nwere ike ime na ala ...
Kedu ihe mere eji eji akwa zinc oxide?
A na-eji ihe eji eji ọkụ zinc oxide eme ihe maka nchekwa nke akụrụngwa eletriki site na ụdị ọ bụla nke oke ọkụ kpatara ọrụ ọkụ ma ọ bụ ịgbanwe ọrụ. (Zinc Oxide lighting arrester line using) Ndị na-ejide ntaneti na-eche nche kachasị elu na ụwa, nke e ji ígwè-oxide (MO) mee ...
Banyere Onwe-agwọ Typedị Shunt Ike Capacitor
E nwere nkọwa nke B (S) MJ capacitor: Onwe-agwọ Typedị Shunt Ike Capacitor na-eji na 50Hz ma ọ bụ 60Hz ike usoro ya tumadi improver: △ Power ihe, △ Belata reactive ike ọnwụ, △ Meziwanye ike na-akpata, edu Belata reactive ike ọnwụ , △ Mma voltaji mma. △ Excavate transformer nke ukwu na otú o ...
Ntughari ohuru 16A Iji 100A 4P Automatic Changeover Switch
General ASIQ ike mgba ọkụ abụọ (nke a na-akpọzi Switch) bụ ngbanwe nke nwere ike ịga n'ihu na-enye ike ma ọ bụrụ na mberede. Ihe ngbanwe ahụ nwere ihe ntụgharị ibu na onye nchịkwa, nke a na-ejikarị achọpụta ma isi ike ma ọ bụ ike ọkọnọ njikere. Mgbe ma ...
1, Ubochi mbu n’onwa mbu bu nke an’obughi dika Ememme Ugwu n’oge ochie, ma ana akpo ya ubochi ohuru. 2, N’akụkọ ihe mere eme nke ndị China, okwu a bụ “Ememme Oge opupu ihe ubi” abụghị ememme, kama ọ bụ nrụtụ aka pụrụ iche na “mmalite oge opupu ihe ubi” nke mbara igwe 24 ...
(1) isi uru nke dropout fuuz cutout ① Ezi nhọrọ. Ọ bụrụhaala na nke dị ugbu a nke njikọ njikọ njikọ nke elu na nke ala dị larịị zutere ihe achọrọ nke 1.6: 1 nhọrọ nhọrọ oke oke akọwapụtara na ọkọlọtọ mba na ọkọlọtọ IEC, nke pụtara ọkwa dị elu nke elu ...
Banyere Onwe-agwọ Typedị Shunt Power Capac ...
New Design 16A Iji 100A 4P Automatic Chang ...